विद्युत् चुहावट १२ प्रतिशतले घट्यो, हुकिङ गरी विद्युत् चोर्ने ५३७ जना पक्राउ
साउन २४, सिरहा । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएपछि दुई आर्थिक वर्षमा सिरहाको लहान क्षेत्रमा करीब १२ प्रतिशतले विद्युत् चुहावटमा कमी आएको छ । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गरेपछि विद्युत् चुहावट ११ दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेर २७ दशमलव २९ प्रतिशतमा झरेको हो ।
आव २०७३/७४ सम्म ३८ दशमलव ९३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएकोमा आव २०७४/७५ मा विद्युत् चुहावट ३४ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झेरेको र आव २०७५/७६ सकिँदा विद्युत् चुहावट २७ दशमलव २९ प्रतिशतमा झरेको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानका प्रमुख विष्णुप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
यस्तै आव २०७५/७६ मा विद्युतको महसुल नबुझाउने ४४९ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्दा रू. १ करोड ९२ लाख १२ हजार ९२५ बाँकी बक्यौता रकम असुली भएको प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले सो अवधिमा हुकिङ गरी विद्युत् चोरी गर्ने ५३७ जनालाई पक्राउ गरी जरिवानाबापत रू. ६७ लाख ८० हजार ११५ राजस्व संकलन भएको बताएको छ ।
सो क्रममा ४४३ थान विद्युत् उपकरणसमेत बरामद गरिएको प्रमुख यादवले बताए । त्यस्तै विद्युत् मिटरबाट विद्युत् चोरी गर्ने १५ जनामाथि कारबाही गरी रू. २१ लाख १७ हजार ६३३ राजस्व संकलन गरिएको विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र लहानले बताएको छ । रासस
रिलायन्स सुगर मिलमा पुनः उखु क्रशिङ शुरू [२०७६ माघ, ६]
रिलायन्सले शुरु गर्‍यो उखु क्रसिङ्ग गर्न, अनुदान रकम पनि वितरण हुँदै[२०७६ माघ, ५]
भोलिदेखि जनकपुरबाट रात्रीकालीन उडान गर्ने तयारी [२०७६ माघ, ५]
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : आशयपत्र मागेपछि सरोकारवाला उत्साहित[२०७६ माघ, ५]
चार जिल्लाका क्रशर व्यवसायी आन्दोलित[२०७६ माघ, ५]